Kudlwengulwe obebelethe ingane ebheke endodeni | News24
Kudlwengulwe obebelethe ingane ebheke endodeni
MArikana - Kudlwengulwe owesifazne oneminyake ngu-20 ubudala, obebelethe ingane emhlane, eMarikana ngaseRustenburg, kusho amaphoyisa aseNorth West ngoLwesihlanu.
Okhulumela amaphoyisa uSergeant Kelebogile Moleko uthe owesifazane udlwengulwe ngezithuba zabo-07:00 ekuseni.
“Kusolakala ukuthi isisulu besisendleleni ebheke lapho kusebenza khona ubaba wengane yaso ngesikhathi sihlangana nomsolwa obephethe ummese,” kusho uMoleko.
Funda nalolu daba: Kutholakale amathambo omuntu ogqokile
“Umsolwa kuthiwa uphoqe isisulu ukuba singene ehlathini nokuyilapho asidlwengulele khona ngaphambi kokuba abaleke ngonyawo.”
“Okwamanje, amaphoyisa awakatholi kahle ukuthi owesifazna udlwengulwe kanjani njengoba ingane ibisemhlane. Imininingwane egcwele isazotholakala ngesisulu uma sesingconywana njengoba sisagcwele ukwethula,” kusho uMoleko, kubika iTheCitezen.